Norway: 19 qof ayaa Viruska hargabka Corona ilaa hada laga helay. - NorSom News
Norway: 19 qof ayaa Viruska hargabka Corona ilaa hada laga helay.
Sida ay xaqiijisay hey´adda la socodka caafimaadka dadweynaha Norway (FHI), ilaa hada 19 qof oo la baaray ayaa la xaqiijiyay inay qabaan Viruska hargabka Corona.
Dhamaan dadka hargabka laga helay ayaa ah dad safar ku tagay dalalka uu cudurka ku faafay, gaar ahaan Italy, Iran iyo Shiinaha, ama qaraabada dadkaas.
12 qof oo dadka hargabka laga helay kamid ah ayaa degan magaalada Oslo iyo agagagaarkeeda, halka magaalada Bergen laga helay 6 qof. Iyo hal qof oo magaalada Tromsø ah.
5 qof oo kamid ah dadka hargabka laga helay ayaa ka shaqeynayay hal qeyb(avdeling) oo kamid ah isbitaalka Ullevål ee magaalada Oslo. Waxaana karantiilis lagu sameeyay isku dar ku dhawaad 100 qof oo qeybtaas ka shaqeynayay ama dad soo booqday ah.
Xigasho/kilde: Til sammen 19 personer har testet positivt på koronavirus i Norge.
Previous article(Video): Adeegyada cusub ee shirkada Juba travel sanadka 2020-
Next articleBooliska Giriiga oo toogasho ku dilay tahriibayaal.